Wholesale Outdoor bhachi vagadziri uye vanotengesa | qiangwei
1.Kusiyanisa dhizaini dhizaini inogamuchirwa kuti iwedzere kutaridzika kunoonekwa. Ruvara rwakasimba uye musiyano wemuvara shanduko inogona kusunungura yekunze fashoni maitiro.
2. Iyo jasi rakagadzirwa neshinda yelotus mashizha ekuunganidza mvura, uko kunonaya mvura uye kutenderera kubva pamusoro, nyore kupokana kunaya uye sinou mamiriro ekunze. Wind-proof, mvura-proof, scratch-proof, inokodzera yemitambo yekunze kusakara, back collar film technology yejira rinounza gobvu, crisp mhedzisiro.
3. Isina mvura zipi yepamberi ichirovera nehomwe, ichimanikidza glue pamuromo wehomwe, inoshanda isingaiti mhepo uye isina mvura. Inotsemura tambo yakadhindwa parutivi rwe zipi bhegi inoita kuti ive yakachengeteka kufamba husiku. Velcro inogamuchirwa pane cuff yekugadzirisa kuomesa zviri nyore uye kudzikisira kutonhora kwemhepo kurwisa.
5. Iyo hood inogona kubviswa, uye iyo zipi inogona kuvanzwa mukora mushure mekubviswa, iine basa rakanaka uye kunyangwe mutsara mutsetse. Chipfuva chinogona kudhindwa, chemufashoni, chakareruka uye chakanaka, uye chinogona kupfekwa pamitambo yekuzorora.
6. Iyo tangi inotora anti-static maviri-mativi granulation, fluffy uye yakapfava, yakanaka uye haina kudonhedza dehwe, haigone kuzadza, kukurumidza kupisa kuunganidza, inogara tembiricha kukiya.
7. Matatu mune imwe yekupfeka nzira (bhachi kusakara kusungira + liner kusakara + liner uye jasi musanganiswa), kutsvaira kwematsutso uye kwechando kunofinha, kuri nyore kubata neanogona kuchinja mutinhimira wekufamba.
8. Hushoma huwandu hwehuwandu hweichi chigadzirwa zvidimbu mazana mashanu, uye zvimiro zvakagadzirwa, mavara uye kudhinda zvinotsigirwa. Chidimbu chimwe nechimwe chakazara mumapepa epurasitiki.
Ichi chigadzirwa chakakodzerwa nemitambo yekunze, kukwira makomo, kutsvedza, kufamba kwechikwata chekambani uye dzimwe nguva dzekupfeka; Pfeka iyo yemitambo yekunze neyekuvaraidza.
Pashure: Outdoor bhachi-t - qiangwei
Zvadaro: Outdoor Mabhachi
Pasi Ski bhachi
Isina mvura Ski bhachi
Ganda ndiro hembe